Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyii Catalonia oo Wadanka Belgium U Cararay.
Hogaamiyii Catalonia oo Wadanka Belgium U Cararay.
Hogaamiyihii Catalonia, Carles Puigdemont ayaa maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayey meesha uu ku sugan yahay, kadib markii Dowlada dhexe ee Spain ay Jimcihii go’aansatay inay kala dirto Ismaamulka Catalonia iyo Baarlamaanka maamulkaasi oo iyagu taageeray aftidii gooni u goosadka ahayd.
Isniintii ayey xukuumada Madrid si toos ah ulla wareegtay dhamaan hawlaha maamul ee gobalka Catalonia oo laga xayuubiyey awoodii ismaamul kadib go’aankii kasoo baxay Baarlamaanka Dowlada Dhexe ee fadhida Madrid.
Saxaafada ayaa si weyn u hadal heysay isniintii waxa uu sameysan doono hogaamiyihii xilka laga qaaday ee Catalonia oo weli taageero kuleh gobalkaasi, shalay gelinkii danbe ayey cadaatay inuu dalka ka baxay kadib markii uu Qareen u dhashay dalka Belguim uu sheegay in Mr. Carles Puigdemont uu ku sugan yahay wadankaasi oo laga yaabo inuu magangelyo weydiisto.
Dalka Belguim oo laftiisa ku dhaqma nidaamka Federaalka ayaa waxaa ka jirta xiisado u dhaxeeya maamulka dhexe ee Federaalka iyo ismaamulka waqooyi ee Flanders oo ay ku sugan yihiin xisbiyo lid ku ah maamulka dhexe ee Brussels. Xisbiyada Flanders ee xagjirka ah ayaa qaarkood horey taageero ugu muujiyey dhaq dhaqaaqa gooni u goosadka ee ka socday gobalka Catalonia ee Waqooyiga wadanka Spain.